Soomaali Maanta Mudahaarad ballaaran ka dhigtay Maraykanka – Radio Daljir
Abriil 26, 2015 8:06 b 0
Axad, Abriil 26, 2015 (Daljir) — Soomaalida ku nool Mareykanka qaarkood ayaa dhigay bannaanbax ay uga soo horjeedaan xarig dhawaan dowladda Mareykanku u geysatay lix dhallinyaro Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay inay doonayeen inay ku biiraan Kooxda Daacish/ISIS.
Mudaaharaadayaasha ayaa ku dhawaaqayay ereryo ay Mareykanka uga codsanayeen in dhallinyaradaas ay kusii dayso waxaana ereyada ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa in dhalliniyarada la xiray ay u baahan yihiin; Cadaalad iyo Sinnaan.
Hooyo dhashay laba ka mid ah lixda dhallinyaro ee la xiray ayaa sheegtay in ciidamada sir-doonka dalkaas ay si xun ula dhaqmeen caruurteeda, waxayna tilmaantay markii la xirayay wiilasheeda inay jiiftay.
Sidoo kale, qaar ka mid ah Soomaalidii dibadbaxayay dibadbaxa ka qayb-qaadanayay ayaa ku doodaya in dhallinyarada Soomaaliyeed ee la xiray aan lagu heyn dambi rasmi ah oo ku caddeynaya falka lagu eedeeyay ee ah inay rabeen inay ka baxaan dalka Mareykanka kuna biiraan kooxda Daacish.
Dhawaan ayay ahayd markii FBI-da Mareykanka ay xireen lix dhallinyaro Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay xariir la leeyihiin Daacish oo ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siiriya.
Tiro ka tirsan shaqaalaha wasaaradaha dowladda Soomaaliya oo Tababar loo qaaday